राजधानीका अस्पतालमा आइसियु अभाव, कोरोना संक्रमितले आइसियु बेड पाउनै छाडे ! – MEDIA DARPAN
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित ६ आश्विन २०७७, मंगलवार ११:३७
काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक रुपमा वृद्धि भईरहँदा गम्भिर प्रकारका बिरामी बढ्न थालेका छन् । बिरामी बढेसँगै राजधानीका अस्पतालमा भिड बढ्न थालेको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकमा १ हजार १५४ जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । यससँगै कोरोनाका कुल संक्रमितको संख्या ६५ हजार २७६ पुगेको छ । कुल कोरोना संक्रमितमध्ये १७ हजार ६११ जना कोरोनाका संक्रिय संक्रमित छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर आइसियु र भेन्टिलेटरमा २२७ बिरामी रहेका छन् । जसमध्ये ३१ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भईरहेको छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
मुलुकमा कोरोनाका संक्रमित र सिकिस्त बिरामीहरूको संख्या बढेसँगै अस्पतालमा भीड बढ्न थालेको छ । राजधानीमा मात्रै सोमबारसम्म १५६ जना गम्भिर बिरामीको उपचार भईरहेको छ । १२८ जनाको आइसियु र २८ जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भईरहेको छ । उनिहरुमा श्वासप्रश्वास, मुटुसम्बन्धी, दीर्घरोग रहेकाले सघन कक्षमा उपचार भईरहेको हो । अस्पताल स्रोतका अनुसार गम्भिर प्रकारका विरामीको ज्यान जोगाउन कठिन बन्न थालेको बताएका छन् ।
कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दै आइरहेको मुलुकको एक मात्र सरुवा रोगको उपचार हुने टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल सोमबार गम्भिर प्रकारका बिरामीले भरिएका छन् । ५४ बेडको यो अस्पतालमा २० वेडको आईसीयूमा कोरोनाका सिकिस्त बिरामीको उपचार भइरहेको छ । तर अहिले सबै आईसीयू बेड बिरामीले भरिएका छन् । अस्पतालको आईसीयूका लागि छुट्याएको २० बेड केही दिनदेखी भरिएका हुन् ।
आइसियु र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने विरामीहरुलाई पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण, छाउनी लगायतका अस्पतालमा राखिएको छ । कतिपयको अवस्था निक्कै कमजोर रहेको र कतिपयले संक्रमणलाई परास्त गर्ने क्रममा रहेको अस्पतालहरुले जानकारी दिएका छन् । टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारी अस्पतालमा सिकिस्त बिरामीको चाप बढेकाले तीन वटा भेन्टीलेटर बेडसहित सात आईसीयू बेड थप्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यस्तै, अस्पतालले आइसोलेसनका लागि थप सात वटा बेड थप्ने तयारी गरिरहेको छ ।
टेकुमा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेकाले अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई मात्र भर्ना गर्न शुरु गरिएको छ । अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको चाप बढ्न थालेपछि अक्सिजन चाहिने निमोनिया भएका बिरामीलाई मात्र भर्ना गरेर उपचार गर्न थालेको उनले बताए । ‘एक दिनमै दुईदेखि तीन जना अक्सिजन चाहिने बिरामीहरू आउन थालेका छन’, उनी भन्छन्, ‘तर अस्पतालको अहिलेको पूर्वाधारले आएका जति सबैलाई भर्ना गरेर उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’राजधानीका केही अस्पतालमा आइसीयू बेड उपलब्ध नहुने समस्या देखिन थालेको छ । कोरोनाका सिकिस्त बिरामीलाई न्यूनतम १० देखि १४ दिनसम्म भर्ना गरेर उपचार गर्नुपर्ने भएकाले भनेको बेला आईसीयू बेड उपलब्ध नहुने समस्या रहेको चिकित्सकहरु बताउछन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ल्याएको बजेट कार्यक्रममा चालु वर्षमा काठमाडौंमा तीन सय शैयाको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने भनिएको थियो । तर उक्त योजना अनुसार अहिलेसम्म अस्पताल निर्माणका लागि गुरुयोजना समेत नबनेको बताइएको छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम ल्याएको तीन महीना बित्तिसक्दा पनि सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।